महिलाको ब ला त्का र कार्यमा बझाङकि यी महिला नै संलग्न …. – PathivaraOnline
Home > समाचार > महिलाको ब ला त्का र कार्यमा बझाङकि यी महिला नै संलग्न ….
महिलाको ब ला त्का र कार्यमा बझाङकि यी महिला नै संलग्न ….
admin February 22, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । महिलामाथि अनैतिक कार्य गर्नमा महिला नै संलग्न भएको पाइएको छ । यो घटना बझाङको हो । त्यहाँ प्रहरीले महिलामाथि भएको ब ला त्का र मा संलग्न भएको आरोपमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । यस्तो घटना गत बर्ष भएको थियो । ती महिला त्यस यता फरार थिइन् । जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिका–६ भाटसैनीकी ४० वर्षीया कालीदेवी धामीलाई आइतबार सिराडबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ती महिलाले अनैतिक कार्यमा सघाएको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ । पी डि तले दिएको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जानकारी दिएको छ । बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काका अनुसार पक्राउ परेकी धामीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ । सोही मु द्दा मा फरार रहेका अर्का आरोपित दिपकबहादुर गु र्धा मीको भने खोजी कार्य भइरहेको उनले बताए । सांकेतीक तस्वीर
काठमाडौ । पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबीच लामो समयपछि भेट भएको छ । लामो समयदेखि टाढा रहेका यि दम्पत्तीबिच झापाको होटल मेची क्राउनमा पूर्वयुवराज दम्पत्तीबीच भेट भएको हो। आमा कोमल शाहको ७१ औं जन्मोत्सवको अवसरमा आमालाई शुभकामना दिन पुगेका पारसले सोही अवसरमा पत्नि हिमानीलाई भेट्ने अवसर पाएका हुन् ।
जन्मोत्सवका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारले झापाको धुलाबारीस्थित मेची क्राउन होटेल एक साताका लागि बुक गरेको थियो । यसअघि पारसबाहेक राजपरिवारका सदस्य जन्मोत्सवमा सहभागी हुने बताइए पनि पोखरामा रमाउँदै गरेका उनी एकाएक मेची क्राउनमा पुगेपछि परिवारसँग लामो समयपछि यसरी भेटघाटको अवसर जुरेको बताइएको छ ।
पारस उक्त कार्यक्रममा पुगेपछि हिमानीसँग केही कुराकानी समेत भएको थियो । हिमानी र पारससहितको सपरिवारको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जामा भाइरल बनेको छ । गत बुधबारदेखि नै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरु उक्त होटेलमै रहेको जनाइएको छ ।
सपना र बिनय बाउछोरी भन्दै किन यस्तो गरे? बाहिरियो यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित)
उर्लाबारी प्रहरी ज्यादती, म’रेको ला’शमाथि यस्तो क’र्तु’त् ठुलो झ*ड़प (भिडियो सहित)
अन्तत: चीनले यसरी जोगायो ओलीको कुर्सी, प्रचण्ड एकाएक किन भए ब्याक ?
भारतमा भएको हिमनदी वि;स्फो’टमा एक नेपालीले ज्यान गुमाएपछि…
कोरोनाबाट विश्वभरबाट ७४ हजार ६२९ को मृ त्यु, साढे १३ लाख बढिकाे संक्रमित (देशरूकाे डाटा सहित)